Soomaaliland oo sheegtay in Qadar ay caqabad ku tahay heshiiska DP World. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASoomaaliland oo sheegtay in Qadar ay caqabad ku tahay heshiiska DP World.
Soomaaliland oo sheegtay in Qadar ay caqabad ku tahay heshiiska DP World.
March 18, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Madaxweynaha Somaliland Muse Bixi Cabdi ayaa u sheegay Jariidad kaso baxda dalka Imaaradka Carabta in dowladda Qatar ay carqaladeynayso heshiiska Somaliland ay la gashay shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaradka.
Mr Bixi ayaa u waramay Jariidada Alceyn waxana uu u sheegay in dowladda Qatar ay ka shaqeenayso sidii meesha looga saari lahaa heshiiska maalgashi ay la saxiixdeen shirkadda DP world.
Waxa uu tilmaamay inaysan jirin wax xiriir maalgashi ah oo kala dhaxeeya dowladda Qatar marka loo eego Sacuudiga iyo Imaaradka oo xiriir dhow ah ay leeyihiin.
Madaxweynaha Somaliland ayaa uga digay Qatar inay joojiso faragalinta toos ah uu sheegay inay ku hayso heshiiskaasi inkastoo si dhab ah uusan u cadeen qaabka ay Qatar saameynta ugu leedahay heshiiska dhacay balse waxaa xusid mudan in Qatar ay colaad diplomasiyadeed kala dhaxeeyo dalka isku taga Imaaradka Carabta.
Dowladda Qatar ayaan ilaa iyo hadda ka jawaab eedeynta kaga timid Somaliland.
Safarkii Madaxweyne Farmaajo ee Qadar oo mar kale dib u dhacay
Howlgalo Ciidamada Amaanka ay ka Sameeyeen Deegaanka Weydow oo Saameyn ku yeeshay isku Socodka iyo Ganacsiga.
43,403 total views, 353 views today
43,403 total views, 353 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
43,475 total views, 353 views today
43,475 total views, 353 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
43,489 total views, 353 views today
43,489 total views, 353 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
43,511 total views, 353 views today
43,511 total views, 353 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
43,546 total views, 355 views today
43,546 total views, 355 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]